यी २ राशिका व्यक्तिको हुन्छ अटुट सम्बन्ध, संसारको कुनै पनि तागतले गर्न सक्दैन अलग !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी २ राशिका व्यक्तिको हुन्छ अटुट सम्बन्ध, संसारको कुनै पनि तागतले गर्न सक्दैन अलग !!
अहिलेको समाजमा प्रेम सम्बन्धलाई निकै नै कमजोर मानिन्छ किनकि शुरुमा अलग नहुने कसम खाएका प्रेमीहरुको सम्बन्ध कतिखेर टुंगिन्छ थाहै हुँदैन ।
प्रेमी जोडीहरुको बीच कुनै सानो कुरालाई लिएर झगडा सुरु हुन्छ र त्यसले सम्बन्धलाई नै समाम्त गरिदिन्छ । तर ज्योतिषका अनुसार केहि यस्ता राशि हुन्छन् जसलाई संसारको कुनै पनि तागतले छुटाउन सक्दैन । कुन् हुन् त ती राशि ? तल पढ्नुहोस्ः
कन्या र कुम्भ राशि
ज्योतिषका अनुसार कन्या राशि र कुम्भ राशिबीच प्रेम सम्बन्ध छ भने तीनलाई कसैले पनि छुटाउन सक्दैन । भनिन्छ कि यी दुई राशि भएकाहरु चाँडै नै एकअर्कासँग प्रेम सम्बन्धमा रहँदैनन् तर यदि साथ भए भने चाँडै छुटिँदैनन् पनि । व्यक्तिगत रुपमा कुम्भ राशि भएकाहरु दूरदर्शी हुन्छन् भने कन्या राशि भएकाहरु सबै पक्षमा राम्रो हुन्छन् ।
सिंह र तुला राशि
सिंह र तुला राशि भएका प्रेमीजोडीलाई पनि अरु राशिका जोडीहरुमध्ये उत्तम मानिन्छ । भनिन्छ कि जब सिंह र तुला राशि भएका व्यक्तिहरु एक अर्कासँग प्रेम सम्बन्धमा बाँधिन्छन् तब उनीहरुलाई कसैले पनि अलग गर्न सक्दैन ।
यी हुन् ३ भाग्यमानी राशि जसले जीवनमा सधैँ सफलता पाउँछन्, तपाई पनि पर्नुभयो कि ?
हरेक व्यक्ति सफल हुनको लागि धेरै नै मिहिनेत गर्छन् । तर धेरै कम मानिसले मात्रा सफलता पाउँछन्। ज्योतिष शास्त्रको कुरा मान्ने हो भने सफलताको पछि मानिसको भाग्यको योगदान पनि हुन्छ । यदि राशिको हिसाबले हेर्ने हो भने तीन यस्ता राशि छन् जसका व्यक्तिहरुलाई सधैँ सफलता मिल्छ । कुन हुन् त ति तीन राशि ?
सबै राशिमध्ये सबैभन्दा पहिला नम्बर १ मा यो राशि आउँछ । ज्योतिषको कुरा मान्ने हो भने मेष राशि भएको व्यक्तिमा नेतृत्वको क्षमता एकदमै राम्रो हुन्छ । यसका साथै मेष राशि भएकाहरुको दिमाग पनि धेरै नै तेजिलो हुन्छ र यीनीहरु कन्फिडेन्ट पनि हुन्छन् जसले गर्दा सधैँ सफलता पाउँछन् ।
यी तीन राशिमध्येको एक धनु राशि पनि हो । धनु राशिका व्यक्तिहरु धेरै नै मिहिनेती हुन्छन् र यसको साथै यीनीहरुको स्वभाव पनि क्रान्तिकारी हुन्छ जसले यीनीहरुलाई अरु व्यक्तिहरुको तुलनामा ज्यादा सफत बनाउँछ।
ज्योतिषका अनुसार मकर राशिका व्यक्तिहरु आफ्नो करियरमा धेरै नै सफल हुन्छन्। यीनीहरुलाई जीवनमा कहिल्यै पनि पैसाको अभाव हुँदैन । मकर राशिका व्यक्तिको पारिवारिक जीवन पनि धेरै नै सफल मानिन्छ। (नयाँ पुस्ता बाट सभार)